NewsOpinionBusinessArts & CultureEducationMultimediaSpecial ReportsIn The Paperzapirothoughtleader NationalAfricaWorldEnvironmentSportSci - TechHealthAmabhungane Topics Zimbabwe elections ‹ First < 7 8 9 10 > SADC to hold emergency meeting on Zim25 Jun 2008 07:25 - Ralph GowlingSouthern African leaders will hold an emergency meeting in Swaziland's capital, Mbabane, on Wednesday to discuss the crisis in Zimbabwe.
Mugabe defies pressure to stop vote24 Jun 2008 16:48 - Cris ChinakaZimbabwean President Robert Mugabe on Tuesday defied mounting pressure to call off Friday's vote, saying he had a legal obligation to go ahead.
Zuma: Zimbabwe is out of control24 Jun 2008 11:18 - Staff ReporterThe situation in Zimbabwe is now out of control, ANC president Jacob Zuma told a conference in Johannesburg on Tuesday.
Fair Zim poll impossible, says UN Security Council24 Jun 2008 07:05 - Louis CharbonneauThe UN Security Council has agreed to take its first formal action on Zimbabwe by ruling that a free and fair election run-off is impossible.
Cricket SA suspends agreements with Zim23 Jun 2008 18:26 - Staff ReporterCricket South Africa has suspended its domestic agreements with the Zimbabwe Cricket Union, it was announced on Monday.
Tsvangirai takes refuge in embassy23 Jun 2008 16:28 - Nelson BanyaZimbabwe's Morgan Tsvangirai, who has pulled out of a presidential run-off election because of violence, sought refuge overnight in the Dutch embassy.
Tsvangirai: I'll negotiate if the violence stops23 Jun 2008 15:38 - Nelson BanyaZimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai says he is ready to negotiate with President Robert Mugabe, but only if political violence stops.
Pressure on UN to act against Mugabe23 Jun 2008 07:05 - Julian BorgerZimbabwe's crisis will now move to the UN Security Council, as the international community mulls fresh sanctions against Robert Mugabe's government.
Halt violence, White House tells Zim 'thugs'22 Jun 2008 16:07 - Staff ReporterThe White House on Sunday demanded that Zimbabwe's government and its "thugs" halt election violence immediately.
SA mediators in Zim amid election tension22 Jun 2008 08:24 - Fanuel JongweA South African mediation team was in Zimbabwe on Saturday as part of efforts to resolve the country's political crisis.
Zimbabwe: Not election violence, but brutal war22 Jun 2008 08:06 - Chris McGrealIf this is the endgame for Robert Mugabe's regime, the brutality of the tactics employed reveal his determination to win at any cost.
Only God can oust me, says Mugabe21 Jun 2008 07:43 - Fanuel JongwePresident Robert Mugabe says "only God" can remove him from office, as Zimbabwe's opposition considers pulling out of next week's run-off election.
The new Liberia21 Jun 2008 06:00 - Mandy RossouwIn certain areas you cannot buy foodstuffs or basic essentials without a note from a headman or so-called war veterans authorising the purchase.
Zimbabwe is about all of us21 Jun 2008 00:00 - Staff ReporterAfrican civil society must make a clear stand on Zimbabwe. The crisis is not only affecting the people of Zimbabwe, but is a great concern for all.
Neighbours round on Zimbabwe20 Jun 2008 08:11 - Staff ReporterZimbabwe's neighbours closed ranks against Robert Mugabe on Thursday as violence against opposition supporters intensified and spread to new areas.
Zim vote 'will never be free or fair'19 Jun 2008 18:40 - Cris ChinakaZimbabwe's run-off presidential election on June 27 is very unlikely to be free and fair, a group of Southern African ministers said on Thursday.
World leaders slam Zimbabwe violence19 Jun 2008 07:55 - Staff ReporterWorld leaders joined forces on Wednesday calling on Zimbabwe President Robert Mugabe to stop intimidating opponents ahead of a run-off vote.
Zim is 'under siege', says Tsvangirai18 Jun 2008 17:02 - Staff ReporterZimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai on Wednesday predicted "a huge turnout" for a presidential run-off vote against President Robert Mugabe.
'Zanu-PF is going for broke'17 Jun 2008 06:00 - Jason MoyoMugabe's party has dispensed with its democratic facade and declared war on the opposition, writes Jason Moyo.
Foreign media choked17 Jun 2008 06:00 - Staff ReporterThe state-owned Zimbabwe Broadcasting Corporation does not show the violence or cover the MDC in its news bulletins.
‹ First < 7 8 9 10 > Connect